Dufcadii ugu horeysay ee ka qalinjebisa Dugsiga Sare ee Ugasyasiin oo Xaflad qabsatay+Sawiro – SBC
Dufcadii ugu horeysay ee ka qalinjebisa Dugsiga Sare ee Ugasyasiin oo Xaflad qabsatay+Sawiro
Posted by Webmaster on April 20, 2013 Comments
Dugsiga hoose dhexe sare ee Ugaas Yaasiin Boosaaso waxaa markii ugu horeysay ka qalin jebisay dufcadii ugu horeysay ee dugsiga sare taas oo lagu soo bandhigay xaflad shalay ay ku qabsadeen gudaha Magaalada .
Xafladan oo ay ka qeyb galeen Masuuliyiin, Waalidiin iyo Waxgarad kala duwan waxaa loo qabtay ardayda sanadkan ka qalin jebineysa dugsiga sare, waxaana ay ku muujiyeen ardayda shucuurtooda ku aadan qalin jebintooda.
Maamulka guud ee Dugsiga Ugaas yaasiin Maxamed Ciise Cusmaan ayaa ka mid ahaa dadkii goobta ka soo jeediyay hadalada, waxaanu shaaciyay in ardaydan qalin jebineysa aysan weli galin imtaxaamaadkii kuna soo fool leeyihiin sidaasi awgeed ujeedada xafladu tahay in loogu duceeyo sidii ay guul uga gaari lahaayeen ka maamul iyo macalin ahaana u duceynayaan.
Waalidiintii goobta ku sugned waxaa ka mid ahaa Faarax Cajab ahna gudoomiyaha gudiga waalidiinta Iskoolka Ugaas Yaasiin waxaana uu goobta ka sheegay in uu u duceynayo ardayda isagoo kula dardaarmay in ay dadaalaan.
Mama Sahro Siciid Maxamed iyana waxay ka mid aheyd waalidiintii meesha ka hadashay uguna duceysay ardayda in ay guul ka gaaraan Imtaxaamaadka ku soo foolleh iyadoo tiri “mid A kena maahee mid B kena in aanu jireyn ayaan ugu duceynayaa”
Xildhibaano, Nabadoono iyo Aqoonyahano kale ayaa iyana goobta ugaga duceeyay waano iyo wax sheegna ugu soo jeediyay ardayda.
Ugu dambeyntii Waxay ardayda qalin jebineysay goobta ku soo bandhigeen Jaan ka ciyaar, iyo Waxyaabo quseeya hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed Siiba Buraanburka iyo Amaanta macalimiinta wax soo bartay.